Hundeeffama SBO Waggaa 32ffaa —-Dokmantarii – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHundeeffama SBO Waggaa 32ffaa —-Dokmantarii
Hundeeffama SBO Waggaa 32ffaa —-Dokmantarii
OMN:የወላይታ ዞን ተወካዮች ከደቡብ ክልል ምክር ቤት ራሳቸውን ማግለላቸውን ተከትሎ ቆይታ ከወላይታ ብሄር ተወላጆች ጋር Jun 15,2020
Magaalaa Baatuutti Qeerroo Abdoo Qaasim (Agabuu Barraaqaa) nama jedhamu qaamni nageenyaa hidheetiin jira. Ergama Shanee tiin sochoosuuf oliif gad deemaara jedhanii waan shakkaniif qaamni basaasaa magaalattii hiisise.
Namni kun nama badii hin qabneef qeerroo magaalattii keessatti gahee guddaa taphachaa tureedha.
Gad dhiisaa nuu jedhaanii. Tapha isaanii itti barree jirra.
Atattamaan nama nagayaa kana gad akka dhiisan nuuf akeekkachiisaa!
Reefka Loon/Horii argitan kana” Kibba Oromiyaa Godina Gujiitti Qabeenya ABO/WBOti Jechuun Poolisoonnii fi Milishaan Akka Ajjeesantu himamaa jira. warri waan kana dhugaa isaa beektan” adda nuuf baasaa.
Dhimmi Oromoo FI Oromiyaa dhimma nam-tokkee mitti, Hireen oromoo FI Oromiyaa Ummaata oromoon murtaa’a jedhee amana ABOn.Kanaaf hiree murteeffannaa uummata oromoo Uummata oromoon akka mirkanaa’uf hojjeta.Warra hiiree murteeffanaa Ummaata oromootti amanan waliinis ni hojjeeta, hojjeetaas Jira.Hireen Uummata oromoo harka eenyuullee hin jiru harka Ummaata oromoo malee.Waardiiyyaan Oromiyaa Uummata oromoo qofa.
Jaal Daawud Ibsaa Ayyaanaa.
Gaafa Baqqalaa Garbaafi Prof Iziqeel Gabbisaa konfaransiidhaaf Maqalee dhaqan, Bilxiginnaan ‘gocha gantummaa’ jettee farrajjee olola bante. Har’a gaafa ofii jaarsummaa na araarsaa ergattu hoo maal ofiin jetti laata?
Ethio 360 Zare Men Ale ” የጄኔራል ብርሃኑ ጁላ ማስፈራሪያ” Monday June 15, 2020